लोकमानलाई नियुक्त गर्नेहरु क्षमा माग्न तयार छन् ? « Pahilo News
लोकमानलाई नियुक्त गर्नेहरु क्षमा माग्न तयार छन् ?
प्रकाशित मिति : 24 October, 2016 3:39 pm
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई हिजोका दिनमा तनमन दिएर यो ठाउँसम्म पु¥याउने नेताहरु नै अहिले लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव बोकेर हिँड्नुभएको छ । मैले नबुझेको सबैभन्दा ठूलो रहस्य हो यो । लोकमानसिंहलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने बेलामा नै हामीले कार्कीलाई त्यो ठाउँमा लैजानु हुँदैन, उनलाई त्यो ठाउँमा लैजाँदा देशकै लागि ठूलो घात हुन्छ भनेर भनेका थियौँ । तर, उहाँहरुले हामीले नबुझेको कुरा बताउनुभयो । सार्वजनिक रुपमै उहाँहरुले ‘उनलाई उपयोग गर्नुपर्छ, भविष्य के–हो, के–हो’ भन्दै नौटंकी गर्नुभयो । तर, यथार्थमा त्यस्तो थिएन । त्यतिबेला उहाँहरुका धेरै स्वार्थ थिए । ती स्वार्थ मिलाउनका लागि लोकमानलाई नियुक्त गर्न उहाँहरुले प्रयत्न गर्नुभयो ।
त्यतिबेला भर्खरै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका खिलराज रेग्मीसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले दबाब दिनुभयो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले लोकमान नियुक्तिको फायल फिर्ता गर्दा पनि उहाँहरुले आफै पुगेर दबाब दिने काम गर्नुभयो । अहिले दुई–अढाई वर्षको अवधिपछि नै के त्यस्तो भयानक कुरा उत्पन्न भयो र उहाँलाई महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने स्थिति आयो । यो पक्ष मैले बुझ्न सकेको छुइनँ ।
दोस्रो कुरा, लोकमानसिंह कार्की पात्र होइन, प्रवृत्ति हो । त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा कोही पनि नेता बोल्दैनन् । किनभने नेपालका हरेक नेताहरुमा अहिले लोकमान प्रवृत्ति हाबी भएको छ । उहाँहरुमा लोकमान प्रवृत्ति जीवित छ र उहाँहरु त्यो प्रवृत्ति वा चरित्रबाट मुक्त हुन चाहनु हुन्न ।
लोकमान त पहिला नियुक्त हुँदा नै योग्य हुनुहुन्थेन । तर, उहाँलाई अहिलेसम्म किन योग्यताको प्रमाणपत्र दिइयो ? यो पनि मैले बुझेको छैन ।
महाअभियोग कानुनी प्रश्न हो । यसलाई कानुनी ढंगबाटै हल गर्नुपर्छ । तर, अहिले यो महाअभियोगको प्रश्न किन आश्चर्यजनक ढंगले आयो ? अहिले संविधान संशोधनका कुरा चलिरहेको थियो । यही बीचमा किन यो विषयले प्रवेश पायो ? अहिले संविधान संशोधन गर्ने र स्थानीय लगायत अन्य तहको निर्वाचन गर्नेतिर राजनीतिक दलहरु लाग्नुपर्ने हो । तर, अहिले लोकमानमै लगेर सम्पूर्ण राजनीतिलाई जोडिएको छ र संविधानलाई नै अल्झाउने काम भएको छ । यो किन भइरहेको छ ? यो त मलाई कृत्रिम खेल हो जस्तो लाग्छ । अहिलेको प्राथमिक कुरा लोकमान हो कि, संविधान हो ? यो कुराको हेक्का राजनीतिक दलहरुमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
अझ रमाइलो कुरा त, जब लोकमानले माओवादीले लडाकुहरुको रकम हिनामिना गरेको बारेमा अनुसन्धान थाल्ने भनेर अभियान सुरु गर्नुभयो, त्यसैबेला महाअभियोगको प्रस्ताव आयो । एमालेको सन्दर्भमा पनि केही होला । तर, त्यो सन्दर्भमा मैले केही बुझेको छैन । तर, जब उहाँले क्यान्टोनमेण्टको सन्दर्भमा हात हाल्नुभयो, तब महाअभियोगको कुरा जोडतोडले उठेर आयो । यसको पछाडि के होला ? मैले बुझेको छैन ।
कांग्रेसले परिपक्व निर्णय गर्ने अपेक्षा
नेपाली कांग्रेस भनेको परिपक्व पार्टी हो । कांग्रेसले गर्ने निर्णय पनि परिपक्व नै हुन्छन् भन्ने मैले ठानेको छु । लोकमान त्यहाँ रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन । लोकमान–चरित्रको विरुद्धमा जानसक्ने हैसियत राजनीतिक दलहरुले राख्छन् कि राख्दैनन् ? यो महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले सबैतिर लोकमान भनेको देश हाँक्ने र डुबाउने दुवै हैसियत राख्ने व्यक्ति हो जस्तो हल्ला भएको छ । लोकमानसँग न देश हाँक्ने चरित्र छ न त देश डुबाउने नै चरित्र । त्यसैले मैले उनका बारेमा धेरै भन्न उचित नै ठान्दिन । तर, विगतमा लोकमानलाई जसले नियुक्त गरेका थिए, अहिले त्यहीँबाट महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । संसद्मा त्यो विषयले प्रवेश पनि पाएको छ । जे होला, ठीकै होला । हामी बाहिर बस्नेहरुले अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर हेर्ने मात्रै हो ।
दूधले नुहाएका कोही छैनन्
अहिले लोकमानको पछि र फेरि केही दिनमा अर्को ‘मान’को पछि लाग्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? त्यसैले यसले कस्तो खालको परम्परा बसाल्यो भन्ने मुख्य कुरा हो । पहिला त्यस्ता पात्रलाई नियुक्ति गर्दा उहाँहरुलाई लाज भएन । नेताहरुलाई लाज हुनुपर्छ । कुनै नेता लोकमानलाई नियुक्ति गरेकोमा क्षमा माग्न तयार हुनुहुन्छ आज ? त्यस्तो व्यक्तिलाई उहाँहरुले किन देशको सम्मानित ठाउँमा राख्नुभयो ? लोकमानलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाउने उहाँहरु चाहिँ दण्डित हुनु पर्दैन ? के उहाँहरु दूधले नुहाएका हुनुहुन्छ ? यसको कसले ‘जजमेण्ट’ गर्ने ? हिजो लोकमानलाई नियुक्त गर्दा गल्ती भयो भनेर उहाँहरुले राष्ट्रसामु क्षमा माग्नु पर्छ कि पर्दैन ? उहाँलाई नियुक्ति गर्ने पात्र चाहिँ चोखो, ऊ चाहिँ गलत हुन्छ र ? गलत व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यक्ति पनि दण्डित हुनुपर्छ । यतिबेला मलाई गणेशमान सिंहजीले भन्नुभएको कुराको सम्झना आयो । सिंह भन्थे, ‘नागा नाँचका ठाउँमा सर्प नाँच, सर्प नाँचका ठाउँमा नागा नाँच’ हुनुको के अर्थ हुन्छ ?’
(वरिष्ठ पत्रकार दाहालसँग कुराकानीमा आधारित)